palestines | Kyaw Kyaw Oo's Words of Love and Truth
Browsing All posts tagged under »palestines«
Meiktila Massacare By myok | Posted March 25, 2013 | Meiktila, Myanmar On 21st March 2013 , Muslim boys were brutally beaten and burnt alive by Buddhist mob and monks. They labelled themselves as “969 campaigners” and murdered muslim boys brutally with the presence of police in Meiktilar city, Myanmar. The police and authorities were not stopping […]
I have started writing this post just after listening the live telephone speech of Gaddafi from Aljazeera, and BBC news. I do not want to waste my time and my readers’ time by writingapost aboutafool. But when the fool is having live coverage of media access to the whole world, I […]
“အမှန်တရားကိုတိတ်ဆိတ်ခြင်းဖြင့်နှုတ်ပိတ်လေသောအခါ ထိုနှုတ်ဆိတ်နေမှူသည်လိမ်ညာခြင်းသာဖြစ်သည်။” ဆိုဗီယက်တော်လှန်ရေးသမား ရက်ဗဂန်နီ ရက်ဗတူရှင်ကို သူ့ကိုမြန်မာစာဖတ်နာသူတိုင်းလေးစားကြသည်။ တူရှင်ကို၏နှုတ်ပိတ်ထားသောအမှန်တရားသည် ဂါဇာတွင်ကလေးငယ်များ သားပျောတ်လင်သေမိခင်တို့၏ ငိုသံများဖြင့်မှန်သောသစ္စာကိုဆိုနေချေပြီ။ ဂါဇာလူသတ်ပွဲကိုဟာမာ့စအပေါ်အပြစ်ပုံခြင်းသည်တရားမျှတမှူမရှိ ဂျူးလူမျိုးတို့ ၏ အစ်ဇရေုး့လွတ်လပ်သောဇီယွန်နိုင်ငံတော်ထူ ထောင်ပိုင်ခွင့်သည် ပါလက်စတိုင်းတို့၏လွတ်လပ်မှူနှင့်လူသားတို့ ရပိုင်ခွင့်အားလုံ့း်ကို အနှစ်၆၀ကျော်နှုတ်ပိတ် ခြင်း၏ ၏ရလဒ်ဖြစ် သည်ကိုစာဖတ်သူတို့စာနာစိတ် ရှိကောင်းရှိလာစေရန် post်ကိုရေးဖြစ်သည်။ ဂျူးတို့၏အဇ်ဇရေးနိုင်ငံစတင်ထူထောင်သူ ဒေးဗစ်ဘင်ဂူရီယန်ရဲ့ Plan D အကြောင်းပထမသိသင့်သည်။ ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများကိုရွာလုံးကျွတ်မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်သည့် depopulationကိုအကြောင်းပြု၍ Plan D ဟုသိကြသည်။ Depopulation သည် လူမျိုးဖြုတ် ခြင်း သို့မဟုတ်လူမျိုးစုတစု၏လူဦးရေ လျော့နည်းသွားအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဇ်ဇရေးသမိုင်းပညာရှင်ဘင်နီမောရစ် စာအရ ပါလက်စတိုင်း ရွာသာ3း69ယောတ်ကို ဟာဂါ့နာဂျူးစစ်တပ်က အဇ်ဇရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးမကြာမီအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ခဲ့သည်။ ဂျူးဗိုလ်ချုပ် ရီးဂဲအယ်လွန်ကို ဒေးဗစ်ဘင်ဂူရီယန်(အဇ်ဇရေးပထမဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မည့်သူ)က အလွန်အင်အားပါသောအမူအရာဖြင့်အသက်အရွယ်မရွေးကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကျန်ရှင်းပစ် ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ (နောက်ဆုံးသတင်းများအရ ဂါဇာတွင်သေဆုံးသူလူတစ်ထောင်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာသေသူလေးဆယ်ရာနှုန်းသည်ကလေးနှင့်အမျိုးသမီးများဖြစ်ခြင်းက စစ်ပွဲလားလူမျိုးဖြုတ်ခြင်းလားစဉ်းစားကြရန်ဖြစ်သည်။) ထိုအမိန့်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့သူမှာ […]
by Kyaw Kyaw Oo Israel claimed to beademocratic country. Israel people voted and they have the government of their choice. Israel people overwhelmingly approved the current Gaza massacre (91% approved yesterday). Palestine too had democratic electionacouple of years ago. Hamas has won in landslide. Palestinian people overwhelmingly approved Hamas to be […]
ဂါဇာတွင်ဇီယွန်ဝါဒီအစ်စရေးဖက်ဆစ်တို့သတ်ဖြတ်မှူကြောင့်သေဆုံးသူငါးရာကျော်ခဲ့ပြီ။ ကလေးငယ် အသေအပျောတ်မှာနောက်ဆုံးရသတင်းများအရတစ်ရာ့နှစ်ဆယ်နှင့်အမျိုးသမီး ငါးဆယ်နှင့်သူနာပြုယဉ်မောင်းနှင့် အရေးပေါ်သူနာပြုဝန်ထမ်းလေးဦး၊ဆရာဝန်တစ်ဦးပါဝင်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းကအစ်ဇရေးသတင်းဌာနမှပြသခဲ့သည့်ဟာမာ့စရော့ကက်တင်ဆောင် လာသည့်လော်ရီကားကိုလေကြောင်းမှဒုံးကျည်နှင့်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်မှာသတင်းမှား ဖြစ်ကြောင်းဘီဘီစီသတင်းဌာနမှဝေဖန်ခဲ့သည်။ဖြစ်ရပ်မှန်မှာဝပ်ရှော့ပိုင်ရှင်မှလုပ်ငန်းသုံး အောက်စီဂျင်ဆလင်ဒါများကိုဘေးကင်းရာသယ်ဆောင်စဉ်ဒုံးကျည်ထိမှန်၍ လူအများသေဆုံးရသည်။ အစ်ဇရေးတို့အစီစဉ်တကျပြင်ဆင်သည့်ဤဂါဇာလူသတ်ပွဲမှာအမေရိကန်နှင့်အနောက်နိုင်ငံ မျး၏မျက်နှာလွှဲခဲပစ်လုပ်ရပ်ကိုအားလုံးမျက်ဝါးထင်မြင်တွေ့ကြရသည်။ လူပေါင်းတစ်သန်းခွဲရှိသည့်ဂါဇာလူနေရပ်ကွက်များကိုအစ်ဇရေးတို့ကမရပ်မနား နေ့စဉ်ရက်ဆက်လေကြောင်းကုန်းကြောင်းရေကြောင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်စဉ် အားလုံးကဟာမာ့စအပေါ်အပြစ်ပုံချကြသည်။ အဆိုးဝါးဆုံးမှာပါလက်စတိုင်းတို့၏ညီနောင်ရင်းခြာအာရပ်နိုင်ငံအစိုးရများ၏ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေမှူကိုအစ်စလမ်ဘာသာဝင်ညီနောင်များအားလုံးအလွန်စိတ်ဆိုးကြ၏။ အီဂျစ်နိုင်ငံသမတမူဘာရက်ကအစ်စရေးအလိုကျဂါဇာ၏တခုတည်းသောထွက်ပေါက်ဖြစ် သည့်ရာမာလာကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့သည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံသားများကညီနောင်ပါလက်စတိုင်းတို့အတွက်အလွန်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြ၏။ အီဂျစ်နိုင်ငံသည်အစ်ဇရေးနှင့်သံတမန်အဆက်အဆံရှိသောရှားပါးအာရပ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အပြင် အမေရိကန်အကူအညီယူနေရသည်။ အီဂျစ်ပြည်သူပြည်သားများကအစ်ဇရေးသို့ဈေးပေါပေါနှင့်သဘာဝဓတ်ငွေ့ရောင်းနေခြင်း ကိုလဲသဘောမတူကြပါ။ အာရပ်နိုင်ငံမှပြည်သူအများစုသည်ဘုရင်စော်ဘွားများနှင့်အာဏာရှင်အစိုးရများ၏အုပ်ချုပ်မှူ နှင့်ခေါင်းဆောင်မှူကိုစိတ်ပျက်နေသည်မှာကြာခဲ့ပြီ။ယခုခဲ့သို့အစ်ဇရေး၏ထင်တိုင်းကြဲနေမှူကို မိမိတို့၏ခေါင်းဆောင်များကလက်ပိုက်ကြည့်နေသောအခါဒေါသကထိုအာဏာရှင်တို့အပေါ် မျှားဦးလှည့်တော့သည်။ မူဘာရက်ကိုအစ်ဇရေးတို့နှင့်အလိုတူအလိုပါဟုအများကစွတ်စွဲကြသည်။ အစ်ဇရေးသတင်းဌာနတခုကဟာမာ့စအား လုံးရှင်းပြီးမှမူဘာရက် က ရာမာလာ နယ်စတ်ဂိတ်ကိုဖွင့်ပေးမည်ဟုဆိုသည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရအာန်တွင်မိုနာဖိခ သာသနာ့အရေခြုံသူများအတွက်ငရဲဘုံ၏ အနိမ့်ဆုံးနေရာတွင်လွတ်လမ်းမရှိနေရမည်ဟုပြဆိုထားသည်။ သာသနာ့အရေခြုံသူများသည်စစ်ပွဲများတွင်သူတို့၏သရုပ်မှန်များပေါ်လာတတ် ကြောင်လဲပြဆိုထားသည်။ ရန်သူ ကိုရန်သူဟူ၍သိနိုင်သော်လဲသာသနာ့အရေခြုံများကိုခွဲခြားသိရန် အလွန်ခက်သည်။ထိုကြောင့်သာသနာ့အရေခြုံများကယုံကြည်သူများကို သမိုင်းအဆက်အဆက်နောက်ကျောကိုဓားနှင့်ထိုးခဲ့ကြသည်။ ဤဂါဇာလူသတ်ပွဲသည် ကြည့်တတ်ပါကမိတ်ဆွေရန်သူအပြင်သာသနာ့အရေခြုံများ ကိုပါဖော်ထုတ်မည့် အရေးအခင်းတစ်ခုအဖြစ်မြင်မိပါသည်။ Allah knows the best, ကျော်ကျော်ဦး
the following post is copied from No Tears For Lebanon(Now) Posted by tearsforlebanon on November 2, 2007 I found this list on Sabbah blog this is something that some of you may already know, but others should read the whole list to see for themselves what is happening. that non-Jewish Israelis can’t buy or lease […]
Following article is from Islam Online, I think all of us should share the essence of this post. Kyaw Kyaw Oo Prayers for Gaza (Share Yours) By Living Shari`ah Staff One time after performing prayer, the imam turned to us and said, “I’ll ask youaquestion, and by Allah, please be honest in your […]
Arabs leaders yesterday launchedadiplomatic offensive for an immediate halt to Israeli raids on the Gaza Strip that killed nearly 200 people yesterday. The Arabs strongly denounced the Israeli aggression on the Gaza Strip and urged an immediate halt to it.They also agreed to intercede urgently with active international parties, especially the United States, […]
Top Clicksboston.com/bigpictureflagcounter.com/more/fchD…tanzil.infounderstandquran.comkyawkyawoo.files.wordpres…quranexplorer.comdailymail.co.uk/news/arti…indianfood.about.com/od/c…quraninburmese.com/Islami…thedeenshow.com/index.php Myanmar ataGlance	Total Population 56.5 million
Big Picture Photoblog ( Bostonglobe)Afghanistan civilians: April 2013 May 20, 2013One of the most desperately poor, war-torn nations on earth, Afghanistan attracts our attention mostly for the wrong reasons. Well over 30 percent of the population lives in absolute poverty, with as many clinging to their places just barely above the poverty line. While Afghanistan is the world's leader in opium exports, domestic consumption afflictsa[…]Deadly crossing May 17, 2013In 2012, sheriff's deputies in Brooks County found 129 bodies, around double the amount from the year before and six times the number recorded in 2010. Most of those who die succumb to the punishing heat and rough terrain that comprise the ranch lands of south Texas. Reuters photographer, Eric Thayer, traveled to Brooks County, Texas and Reynosa, Mexico […]Chechnya: daily life May 15, 2013After two Chechen brothers were named in connection with the Boston Marathon bombings, Reuters photographer Maxim Shemetov took this collection of images titled "Inside Modern Chechnya" showing daily life in the semi-autonomous Russian region known foracenturies-­old tradition of defying Moscows rule. Shemetov focused on the area in and around t […]Sugar and salt May 13, 2013Although modern techniques often bring sugar and salt to our tables, these two simple treats for the palate are still harvested and processed in traditional, if not ancient methods the world over. Over 160 million tons of sugar is produced annually in well over 100 countries, most of it processed from cane in tropical countries. The world uses 240 million to […]National Geographic Traveler Magazine: 2013 Photo Contest May 10, 2013The National Geographic Traveler Magazine photo contest, now in its 25th year, has begun. There is still plenty of time to enter. The entry deadline is Sunday, June 30, at 11:59 p.m. Entrants may submit their photographs in any or all of the four categories: Travel Portraits, Outdoor Scenes, Sense of Place and Spontaneous Moments. The magazine's photoe[…]Wildfires in California May 8, 2013California Governor Edmund G. Brown Jr. yesterday declared this week as "Wildfire Awareness Week" in recognition of last week's devastating fires northwest of Los Angeles. His proclamation noted, "In an average year, wildfires burn 900,000 acres of California's timber and grasslands." Rains that moved into the area on Monday hel […]By rail May 6, 2013Simple and efficient, rail travel nonetheless inspiresasense of romance. By train, subway, andaseemingly endless variety of trams, trolleys, and coal shaft cars, we've moved on rails for hundreds of years. Industry too relies on the billions of tons of freight moved annually by rolling stock. Gathered here are images of rails in our lives, the third […]Daily Life: April 2013 May 3, 2013I look forward each month to browsing the compilation of "slice of life" images from around the world. They offer usavisual break, if you will, from the tragedies, disasters, wars and violence seemingly so pervasive in our world. Through these images, we can immerse ourselves in the simplicity of everyday life. Daily Life: April 2013 takes us to […]Hurricane Sandy:6months later May 1, 2013Damage left behind by Hurricane Sandy's landfall last October can still be seen along the US East Coast, especially the hard hit beachfront areas in New Jersey, as many communities work to move forward. Dubbed "The Superstorm" and reaching 1,000 miles wide at times, Sandy caused some $50 billion in damage and killed 159 people. ( 27 photos tot […]304 Dead in Building Collapse, Bangladesh April 26, 2013The search for survivors continues in one of the worst manufacturing disasters in history. Fifty survivors were found today; the death toll stands at 304. Terrified workers notified the police, government officials andapowerful garment industry group about cracks in the walls, discovered just days before the collapse. The owner of the eight-story Rana Plaz […]Big Pictures